PressReader - Ilanga: 2017-09-11 - Zinkulu izinguquko ezibonakalayo ekusebenzeni kwesibhedlela saseVryheid
Zinkulu izinguquko ezibonakalayo ekusebenzeni kwesibhedlela saseVryheid
Ilanga - 2017-09-11 - Imibono - Majuba Mavuso IMEYA YASEDUMBE
MHLELI: Ngithi mangisike elijikayo ngodaba lwabahlengikazi basesibhedlela saseVryheid lapho kunombiko othi babelethise ngenkulu impumelelo intokazi yakwaSangweni uNkulunkulu ayibusise ngamawele amane.
Okwenza ngilangazelele ukuphawula ngale mpumelelo yalaba bahlengikazi wukuthi eminyakeni eminingi eyedlule kukekwaba nokungabhekani kahle phakathi kwesibhedlela saseVryheid nezakhamizi zaseDumbe ebezinokuthunyelelwa kulesi sibhedlela.
Ngicabanga ukuthi abantu baseDumbe bangofakazi bami kwelokuthi bake banqikaza mayelana nokudluliselwa esibhedlela saseVryheid ngenxa nje yempatho nezinkulumo obekuthiwa zikhulunywa ngabanye abahlengikazi bakulesi sibhedlela. Abanye kuthiwa bebelibeka ngembaba elokuthi baze bavalelwa ngabantu baseDumbe kwaGayumuthi, bethi "nifunani lapha, kanizelaphi ngani nina eDumbe ngoba nisebenzisa imithi". Ngaleso sikhathi besekungathi kusemthethweni nje ukubukelwa phansi komuntu obesuke eyofuna usizo esibhedlela saseVryheid.
Eminyakeni eli-10 edlule, kunabantu abebevela kuwadi 5 eTholakele, eDumbe, abafakwe esibhedlela saseVryheid, omunye wabo ubengakwazi kwakunyakaza.
Abakubo bagcina bekhuluma naye kuyimpelasonto kwathiwa uxinekile akakwazi ngisho nokuyokhuluma nocingo. Kuthe uma umndeni wakhe ufika ngakusasa, kawubange usamthola egumbini abelaliswe kulona.
Ngikutshela ukuthi lowo muntu ucingwe kuwona wonke amagumbi asesi- bhedlela, ngisho nangaphandle kwaso, lutho ukutholakala. Cishe waze watholakala emuva kwamasonto amathathu, nakhona watholakala ngaphandle ehla-thini eseqala ukonakala. Lokho kuwulimazile umphakathi waseDumbe ngoba kuze kube yinamhlanje, akekho owasesibhedlela onencazelo yokuthi umuntu obegula, engenamandla, uphume kanjani egunjini lakhe efake izimpahla zasesibhedlela.
Kuphinde kwaba nesinye isigameko lapho omunye umuntu wakhona eTholakele engeniswe kulesi sibhedlela, kuze kube yinamuhla akaziwa ukuthi uphelelephi. Namanje umndeni wakhe usakhalela ukuthi okungenani uma kungatholakala ithambo lakhe noma izicucu zezimpahla abezigqokile.
Sekuphele iminyaka engaphezu kwe10 lowo muntu engeniswe kulesi sibhedlela exinwe wukugula. Eminyakeni emithathu kuya kwemine eyedlule, sike safunda olunye udaba olushicilelwae yilona kanye iphephandaba lethu lesizwe ILANGA, lapho lisibikele ngokuphambana kwezinkomishi, izingane ezizalelwe esibhedlela saseVryheid zanikwa abantu okungebona onina.
Intokazi yakuwadi 6, eNkembeni, eDumbe, itshelwe ukuthi ingane eyigonile yayincelisa, yayikhulisa, ibone kwabezindaba kuthiwa ukhulisa ingane okungeyona eyakhe. Nanamhla lokhu, kusenombuzo othi zaphambana kanjani izinkomishi. Udaba lwakhona ngigcine sengathi lusenkantolo lapho obekunomdonsiswano khona, kuqaguliswana ngengane ukuthi ngabe izalwa ngubani. Yebo leyo ntokazi yakwaNkosi ingene esibhedlela eVryheid ikhulelwe vele pho isitetile yabe isishonaphi ingane yayo. Kwenzeke kanjani ukuba inikezwe ingane engayizali?
Zonke lezi zindaba okuhlanganisa nokuduka komunye nalowo owatholakala eseshonile ngaphandle kwamagceke asesibhedlela, sazilandelela.
Olwalona owanyamalala size saxhumana ngqo nezikhulu ebeziphethe eMnyangweni wezeMpilo KwaZuluNatal, kwaze kwafika nenye insizwa okuthiwa ngeyakwaMadlanduna yathi izokwenza indlela yokuthi umndeni uqinisekiswe ukuba ayavalwa amabhuku, mawuhlanze ngedela ngoba vele othandiweyo wawo kuyacaca ukuthi akekho futhi ngeke aphinde atholakale.
Ngifisa ukuvala ngaleli-ke lokuthi amanesi aseVryheid abelethise ngenkulu impumelelo udadewethu wakwaSangweni kuwadi 7, eMatshekazi, ngaphansi kukaMasipala waseDumbe.
Isenzo sabahlengikazi bonke ababambe iqhaza ekubeni abelethe ngenkulu impumelelo lowaya sisi, njengemeya yaseDumbe nasemphakathini waseDumbe wonkana siyasibonga.
Siwethwesa uphaphe lwegwalagwala amanesi aseVryheid asebenza ngokuthoba nangempumelelo ukubelethisa le ntokazi. Namanje ngiyagcizelela ukuthi ngempela impatho yaseVryheid kayisafani nakuqala. Ngibona sikhona isidingo sokuba sakhelwe isibhedlela esiyoba seqophelweni eliphezulu esifana neGreys noma iChief Albert Luthuli.
Kuye kuthiwe isiguli esithile kumele siyoxilongwa ngochwepheshe abathile eGreys noma eLuthuli, kushiwo kanjalo nje, yingoba kuyasetshenzwa ngempela kulezo zibhedlela.